शालिकरामको आत्महत्या नै थियो, बयानमा रविले के भने ? - Sidha News
शालिकरामको आत्महत्या नै थियो, बयानमा रविले के भने ?
काठमाडौँ— जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले अदालतमा पेस गरेको कागजातमा माउन्टेन टेलिभिजनका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले आत्महत्या नै गरेको अटोप्सी रिपोर्ट पेस गरेको छ । उक्त रिपोर्टले पुडासैनीको मृत्युबारे चलेका अनेकन अफवाह र हल्लाहरुलाई चिरेको छ ।
माउन्टेन टेलिभिजनका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक विप्लव पोख्रेलले समेत प्रहरी बयानका क्रममा आत्महत्या भन्दा दुई वा तीन दिन पहिले शालिकरामले आफू बिरामी रहेको र दबाई खाइरहेको कुरा आफूलाई बताएका बयान दिएका छन्। प्रबन्ध निर्देशक पोख्रेलले भनेका छन, ‘उनले स्टाफहरुलाई पनि मोबाइलमा रहेको औषधिको फोटोहरु देखाएका थिए।’
शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण: प्रहरीसँगको बयानमा रविले के भने ?
त्यसो त पत्रकार शालिकरामले आफू बिरामी भएको भन्दै प्रेमिका अस्मितालाई समेत फेसबुक म्यासेन्जरलमा लेखेका थिए। उनले अस्पतालको बिरामी पुर्जाको फोटोसमेत अस्मितालाई पठाएको देखिन्छ।
प्रहरीले विभिन्न व्यक्तिसँग लिएको बयानले पनि शालिकरामको व्यक्तित्व र उनको पृष्ठभूमीबारे नयाँ तथ्यहरु बाहिर ल्याएको देखिन्छ।
शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण: बयानमा के भनिन् अस्मिताले ?
मृतक पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले माउन्टेन टेलिभिजनमा चलाउने कार्यक्रम मिसन न्युजको क्यामेरामेन ओमबहादुर भुजेलले शालिकरामले आफू चितवनको रामनगरस्थित एक होटलमा स्टिङ गर्न जान्छु भनेर चितवन गएको बताएका छन्।
अदालत र प्रहरी स्रोतबाट प्राप्त विभिन्न कागजातहरुमा शालिकराम चितवन किन गएका थिए भन्ने तथ्य भने खुल्न सकेन।